Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Hwang Hee-chan Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Akụkọ ndụ anyị Hwang Hee-chan na-egosi Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Hwang Won-kyung na Song Young-mi) na ndụ ezinụlọ. Nke ka nke, ndụ Hee-chan, enyi nwanyị, Net Worth, na Ndụ Onwe.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -ewetara gị njem ndụ onye na -aga n'ihu, site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji kpoo agụụ akwụkwọ akụkọ gị, nke a bụ oge ọ bụ nwata ruo ebe okenye-nchịkọta zuru oke nke Hwang Hee-chan Bio.
Nchịkọta akụkọ ndụ nke Hwang Hee-chan. Lee akụkọ ndụ ya na ebili.
Ee, onye ọ bụla maara ụdị egwuregwu ike ya siri ike, nke gbochiri ndị na -agbachitere ya anya n'ihu ọnụnọ ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ gbasara akụkọ ndụ ya, nke na -atọ ụtọ nke ukwuu. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Hwang Hee-chan Akụkọ nwata:
N'ihi ụdị egwuregwu ya, ndị egwu nyere ya aha otutu Bull (Hwangso). Hwang Hee-chan mụrụ na 26th ụbọchị nke Jenụwarị 1996 nna ya, Hwang Won-kyung na nne, Song Young-mi, na Chuncheon, Gangwon, South Korea.
Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụaka abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya, nke dị n'okpuru. Onye na -egbu ihe nọrọ ezinụlọ ya gbatịkwuru ụbọchị nwata. Ịbụ nwa ikpeazụ a mụrụ n'ụlọ ya mere ka onye ọ bụla hụ ya n'anya nke ukwuu.
Ihe onyonyo a na-adịghị ahụkebe nke Hwang Hee-chan na nna ya, Hwang Won-kyung yana nne ya, Song Young-mi.
Mgbe ọ bụ obere nwa, Hwang nwere mmasị na Taekwondo. Ọ ghọrọ egwuregwu mbụ ọ malitere. Site na ịnụ ọkụ n'obi, nwa okorobịa Korea ahụ ji nkà niile dị mkpa ọ nwere ike mụta ka eme nke ọma na Taekwondo.
Mgbe amụrụ ya, ezinụlọ Hwang si na Chuncheon kwaga Bucheon. N'ebe ahụ, a zụlitere ya na nwanne ya nwanyị nke okenye. Mgbe ọ na -etolite, onye na -aga n'ihu nwere obi ụtọ ịnọ na nwanne nna ya na nne na nna ya ochie.
Foto tụfuru ụbọchị nwata ya na nwanne ya nwanyị nke okenye. N'ezie, ha mejupụtara otu ndị mmadụ na -atọ ọchị.
Ha na -akpali ya mgbe niile ịrụsi ọrụ ike n'inwe ihe ịga nke ọma n'egwuregwu. Ka ọ na-erule oge Hwang mechiri 6, ọ hụrụ ka obodo ya siri ruo ọkara agba nke 2002 FIFA World kwadoro na ala ụlọ.
Ọ bụ n'ezie ihe kwesịrị ịja mma nke South Korea rụpụtara na nnukwu mkpali maka nwata ahụ. N'oge na -adịghị anya, o kpebiri ịtụgharị uche na bọọlụ, nke ahụ gbanwere ndụ ya kpamkpam.
Azụ Ezinaụlọ Hwang Hee-chan:
Obi dị m ụtọ na onye mgbaru ọsọ ahụ ekwesịghị ichegbu onwe ya maka nsogbu ego n'ihi na nne na nna ya nwere ihe zuru oke maka mkpa ya. Ee, ihe ngosi ezinụlọ ya dị ka ezinụlọ nke etiti.
Ma nna Hwang na mama m nwere omume obi ụtọ. O nyeere ha aka ijikwa azụmaahịa ha nke ọma. N'ezie, e nyefeela ụmụ ha na ndị ikwu ha ihe ọchị.
Hwang Hee-chan Mmalite Ezinụlọ:
Enwere ọtụtụ ndị Eshia na-eme akụkọ n'egwuregwu bọọlụ elu elu Europe, Hwang bụkwa otu n'ime ha. Ọ bụ onye mba South Korea ma mee ọtụtụ mbọ iji mee ka obodo ya dị mpako.
Hwang bụ nwa amaala Chuncheon, nke dị na mpaghara ugwu nke ógbè Gangwon. Ebe amụrụ ya bụ obodo oge ochie amaara na mmadụ bi na ya ihe dị ka afọ 1000 gara aga (dịka nke 2021).
Maapụ Korea na -egosi ebe onye ohi dribbler si.
N'ụzọ na -akpali mmasị, Chuncheon bụ onye ama ama maka nri ọgịrịga ọkụkọ ya, nke ụmụ amaala na -akpọ 'dak galbi '.
Hwang Hee-chan Mmụta:
Mgbe nne na nna onye ọkpọ ahụ nwere obi ike na ọ nwere ike ịnọrọ onwe ya, ha mere ka ọ kwaga Uijeongbu. N'ebe ahụ ọ gụrụ akwụkwọ na Singok Elementary School. Ka ọ na -erule elekere 11, Hwang tụfuru Taekwondo iji nye nlebara anya zuru oke na football.
Site na mgbe mbụ ọ banyere n'egwuregwu ahụ, ọ mara mma nke ukwuu na ya. N'ịbụ onye na -adọrọ mmasị n'egwuregwu bọọlụ, Hwang kpebiri ịchụso ọrụ dị ka onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara.
Akụkọ Hwang Hee-chan Football:
Dịka anyị kwurula na mbụ, nwa mmefu ahụ malitere njem bọọlụ ya n'ụlọ akwụkwọ elementrị. N'ụzọ dị ịtụnanya, Hwang toro dị ka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma na otu ụlọ akwụkwọ ya.
Ịdị ike na ike egwuregwu ya karịrị nke ndị ọgbọ ya ozugbo ọ malitere.
Ọ tụfuru ohere ị nweta ihe mgbaru ọsọ. N'ihi ya, onye na -aga n'ihu malitere imepụta akụkọ ya na arụmọrụ ya n'asọmpi a ma ama.
Ị maara?… Hwang Hee-chan dị afọ 11 mgbe ọ ghọrọ onye mgbaru ọsọ kacha elu na asọmpi Hwarangdaegi 2008 na iko ntorobịa Dongwon. N'ikpeazụ, arụmọrụ ya nwetara ya oghere na ndị otu mba U-12 nke South Korea.
N'ụzọ na -akpali mmasị, o gosipụtara ikike na -enweghị atụ ka ọ gbara ihe mgbaru ọsọ 22 maka mba ya na iko Kanga na Canberra, Australia. Nke a ghọrọ ihe mgbaru ọsọ kachasị elu a gbaburu n'akụkọ asọmpi ahụ.
Hwang Hee-chan Ndụ Ndụ Ọrụ:
Na 2009, South Korea nabatara ikike ya site na ịsọpụrụ ya na Cha Bum-kun Football Award. A na -enyekarị akara ngosi maka onye egwuregwu bọọlụ kacha eto eto na mba ahụ.
Ọ malitere imebi ndekọ na ịnata ihe nrite site na nwata.
Mgbe Hwang gụsịrị akwụkwọ na Elementary School, ọ guzobela onwe ya dị ka onye na -eme egwuregwu na -ekwe nkwa. Ọ bụ na nnukwu amamihe ka nne na nna ya mere ka o deba aha ya na Jecheol Middle School.
Mkpebi ha mere ka onye na-akụ ọkpọ ahụ nwee ike igosipụta maka ndị otu U-15 nke klọb bọọlụ ụlọ akwụkwọ ya-Pohang Steelers. N'ezie, ọ were naanị nkeji ole na ole ka ọ mara ndị egwuregwu ibe ya.
Ịkwụsị nsogbu niile:
Dị ka akara aka ga -enwe, Hwang malitere imerụ ọtụtụ nsogbu ka ọ gara n'ihu na -edobe ndekọ ọhụrụ na football. Ọbụna o nyeere Pohang Steelers aka imeri ngalaba ụlọ akwụkwọ etiti nke Korea National School League.
Oge ya na Pohang Steelers juputara na ọtụtụ ihe ncheta echefuru echefu.
N'ihi nnukwu arụmọrụ ya, onye nyere goolu nyere MVP award nke asọmpi ahụ. N'ọgbọ a nke ndụ ya, ọtụtụ ndị nyocha kwenyere na Hwang nwere ike karịa ọkwa nke ndị egwuregwu Eshia ochie Park Ji Sung.
Hwang Hee-chan Biography-Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Afọ ndị sochirinụ ọrụ ya hụrụ ya ka ọ bilitere n'òtù U-18 nke Pohang Steelers. Ọ sonyekwara Pohang Jecheol High School n'otu oge. Hwang gara n'ihu na -ebi ndụ kwekọrọ n'aha ya na pitch.
Ọ nọgidere na -enweta ihe mgbaru ọsọ karịa ndị ọgbọ ya n'asọmpi dị iche iche. Mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, chi juputara n'egwuregwu bọọlụ nwere nkà ka ọ kagburu nkwekọrịta ya na klọb Austria, Red Bull Salzburg. N'ebe ahụ, o nyere aka na ihe ịga nke ọma klọb ahụ iji merie trophies dị iche iche.
Otu n'ime oge kachasị echefu echefu nke ndụ ọrụ ya. Okwu enweghị ike ịkọwa oke ọ joyụ jupụtara na obi ya ka ọ na -eme mmemme mmeri otu ya.
N'agbanyeghị obere oge egwuregwu o nwere n'òtù ọhụrụ ya, mmetụta ya n'oge ngosi ole na ole ndị ahụ enweghị atụ. N'August 2018, klọb ya hụrụ mkpa ọ dị nyere ya Hamburger SV iji nweta oge igwu egwu ma nweta ahụmịhe zuru oke.
Hwang Hee-chan Biography-Akụkọ ịga nke ọma:
Mgbe ọ laghachitere na Salzburg, onye na -aga n'ihu kpụrụ trident mwakpo dị egwu Erling Haaland na Takumi Minamino. Ngwakọta ha ghọrọ ihe na -egbu egbu nke na ọ dọtara aka site n'aka ndị na -akwado ya na ndị nyocha.
Lee ọmarịcha ihe ịhụ ụmụaka atọ na -eto eto ka ha na -emekọ ọnụ. N'ezie, Hwang ejirila ndị egwuregwu a pụrụ ịtụkwasị obi gbaa onwe ya gburugburu.
N'igosi ike ya na -enweghị atụ n'agbanyeghị na ọ dị obere, RB Leipzig bịara na -arịọ maka mbinye aka ya. N'ọnwa Julaị 2020, onye agha Korea ahụ bịanyere aka na klọb German afọ ise.
Ọdịda meteoric ya na stardom bịara wụrụ ezinụlọ ya akpata oyi n'ahụ. Ọ na -ewe nne na nna Hwang obere oge iji hazie eziokwu na ọ na -egwu n'otu klọb kacha mma na Germany.
Mgbe ọ dara akara na Bundesliga oge mbụ ya, Leipzig zigara ya Wolverhampton Wanderers na mbinye ego na August 2021. Ndị ọzọ, dịka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Site n'ile anya, ị ga -amata na a nabatara ya nke ọma na Molineux Stadium. Anyị nwere olile anya na ọ nwere ọmarịcha ọnụnọ na Wolverhampton.
Nwanyị Hwang Hee-chan:
Mgbe anyị na -achịkọta akụkọ akụkọ ndụ a, anyị chọpụtara na onye ọkpọ agha nwere ike kwụsị ije ije n'otu ụzọ ahụ Nwa Heung-min. Enwere omume ọ bụla nke Hwang ga -ezere inweta nwunye ruo mgbe ọ ga -etolite na bọl.
Kedu onye nwere ike bụrụ enyi nwanyị nwere ihu ọma nke onye dribbler teknụzụ?
N'ihi ya, ọ banyebeghị na mmekọrịta ịhụnanya ọ bụla nke anyị maara ugbu a. Ekele maka ọmarịcha anya ya, Hwang agaghị agbasi mbọ ike inweta enyi nwanyị mgbe ọ bụla o kpebiri.
Hwang Hee-chan Ndụ Nkeonwe:
Otu ọmarịcha nkà ihe ọmụma nke na -akọwapụta onye na -agba ihe mgbaru ọsọ site na pitch bụ FREEDOM. Hwang anaghị achọ ịchọta onwe ya n'ọnọdụ ihere nke ga -amụba ụdị mmachi ọ bụla.
O kwenyere na onye ọ bụla nwere ikike ime ihe masịrị ya ime. N'ezie, onye Korea na -ahụ mgbe niile na ọ na -echekwa ikuku dị nro nke gburugburu ya mgbe ọ bụla nọ naanị ya.
Ị nwere ike ịhụ obi ụtọ ya na foto dị n'okpuru ebe ọ na -agbatị aka ya na mmegharị nke na -egosi ụdị onye ọ bụ.
Lee mmetụta mara mma na -agbada n'azụ ya ka ọ na -eku ume na gburugburu ọmarịcha.
Ndụ Hwang Hee-chan:
N'ụzọ na -akpali mmasị, onye na -aga n'ihu egosighi ụdị ọ bụla nke gosipụtara mmasị ya ibi ndụ okomoko. N'agbanyeghị na ọ nwetara nnukwu ego, Hwang debere usoro mmefu ya na igodo dị ala.
Ka m na -ede akụkọ ndụ a, ahụbeghị onye na -eme egwuregwu na ụgbọ ala ọ bụla. Agbanyeghị na ọ zụrụ ụlọ dị oke ọnụ, ekwughi ihe ọ bụla gbasara ya ruo 2021. Nke a bụ foto na -egosi onwe ya dị umeala n'obi ka ọ na -ahụ iko kọfị n'ime oghere dị jụụ.
Ọmarịcha ụzọ iji tinye ego ya na obere mmefu ego. N'ezie, Hwang ka kpebisiri ike ijigide ụzọ ndụ ya dị ala.
Hwang Hee-chan Ezinụlọ:
Amara mba onye ahụ na -eti ihe maka nrara ha zuru oke maka njikọ ezinụlọ. Ọ bụ ya mere ụlọ ya ji na -emekọ nke ọma dịka ezinụlọ buru ibu. Na ngalaba a, anyị na -ewetara gị akụkọ na -atọ ụtọ gbasara onye ọ bụla nọ na njikwa ya.
Banyere Nna Hwang Hee-chan:
Hwang Won-kyung bụ nna onye na-eme egwuregwu. Ya na nwa ya nke ọdụdụ ewulitela ezigbo mmekọrịta nwa na nna. Agbanyeghị na ọ nweghị ezigbo egwuregwu bọọlụ, Hwang Won-kyung na-agba mbọ ịkwado mbọ nwa ya nwoke.
Lee foto na-adịghị ahụkebe nke onye na-eme egwuregwu na nna ya, Hwang Won-kyung.
N'ụzọ na -akpali mmasị, ọ gụrụ akwụkwọ ma mara nke ọma gbasara otu egwuregwu bọọlụ si arụ ọrụ. N'ihi ya, nna Hwang nyeere ya aka ikpebi nkwekọrịta ọ ga -ewe yana nke ọ ga -atụfu n'oge mbụ nke ọrụ ya.
Banyere nne Hwang Hee-chan:
Ijikwa ụlọ mebere ma ụmụaka ma ndị okenye dị ka ọrụ na -agwụ ike. Obi dị m ụtọ, nne Hwang-Song Young-mi-ruru ọrụ nke ilekọta ezinụlọ agbatịkwuru.
O ketala ọmarịcha anya ya site na nne ya, Song Young-mi.
Ọ bụ onye nzuzo nwa ya na onye ndụmọdụ pụrụ iche. Nne Hwang na-enwekarị nlebara anya na mmetụta ịhụnanya karịa nwa ya nwoke ebe ọ bụ nwa ikpeazụ nke ezinụlọ.
Banyere ụmụnne Hwang Hee-chan:
Dịka m kwuru na mbụ, onye na -ahụ maka teknụzụ anaghị anọ naanị ụbọchị nwata ya. O toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke okenye, onye akpọghị aha ya n'akwụkwọ akụkọ ndụ ya. Ikekwe ị maghị na nwanne nwanyị Hwang tọrọ ya afọ abụọ.
Banyere ndị ikwu Hwang Hee-chan:
Onye na -eto eto dribbler nwere njem njem dị egwu ya na nne na nna ya ochie. Mgbe ọ na -etolite, nne na nna ya ji ọrụ n'aka nke na ọ na -ejikarị ụbọchị nna ya na nne nne ya.
Foto mara mma nke Hwang Hee-chan na nne na nna ya ochie. Ha bụ ndị ya na ya kacha tụkwasịrị obi.
Ha na -elekarị ya anya n'oge ọzụzụ ya ma kwadebekwara ya ezigbo nri. A ga -edebanye obiọma ha mgbe niile n'obi onye ọkaibe na -eti ihe. Hwang nwekwara obi ụtọ ịnọnyere nwanne nna ya mgbe ọ na -etolite.
Hwang Hee-chan Eziokwu Eziokwu:
Mgbe ị gụchara akụkọ ndụ zuru oke nke onye dere ya, lee ụfọdụ ihe ga -enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya nke ọma.
Eziokwu #1: Onye Billionaire na South Korea:
Tupu mbufe Hwang na Wolverhampton na mberede, ọ na -enweta ụgwọ ọnwa kwa afọ nke £ 2.1 nde na Leipzig. Mgbe anyị nyochachara usoro ego ya nke ọma, anyị mere atụmatụ na 2021 Net Worth ya bụ nnukwu nde £ 3.6.
N'okpuru ebe a bụ ndakpọ ụgwọ ọnwa ya n'oge anakọtara akụkọ ndụ ya. Ị maara?… Otu onye Korea ga -arụ ọrụ afọ 45 iji nweta ihe ọ na -enweta n'ime otu izu.
Hwang Hee-chan Leipzig Salary ndakpọ na South Korea Won (KRW)
Kwa Afọ: 3,372,358,500 Korean Won (KRW)
Ọnwa kwa: 281,029,875 Korean Won (KRW)
Kwa Izu: 64,753,427 Korean Won (KRW)
Kwa :bọchị: 9,250,490 Won Won (KRW)
Kwa elekere: 385,437 Korean Won (KRW)
Nkeji nkeji: 6,424 Korean Won (KRW)
Kwa Nke Abụọ: 107 Korean Won (KRW)
Anyị ejirila nlezianya gbakọọ ụgwọ ọnwa ya ka elekere na -akụ. Hụ ego ole Hwang Hee-chan mere kemgbe ị batara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Hwang Hee-chan's Bio, nke a bụ ihe o nwetara.
Eziokwu nke 2: Tattoos Hwang Hee-chan:
N'adịghị Shinji Kagawa, nwa mmefu Eshia enwela ezigbo mmasị na nka nka. Agbanyeghị, ọ tinyebeghị ọtụtụ egbugbu n'ahụ ya. Site n'ihe anyị hụla ruo ugbu a, Hwang nwere naanị mkpụrụedemede isii edere n'obi ya na nkwojiaka aka ekpe.
Edere egbugbu egbugbu ya iji kwanyere nne na nna ya ochie ugwu.
Dị ka onye ọkpụkpọ ahụ si kwuo, mkpụrụedemede egbugbu ahụ bụ aha nna nna ya na nne nne ya. Ọ dịghị mgbe ọ ga -achọ ichefu ịhụnanya na nlekọta ha nyere ya site na nwata.
Ọ bụ ya mere o ji susuo nkwojiaka ya aka dị ka mmemme mgbe o mechara ihe mgbaru ọsọ. Ọ bụ mmegharị aka kacha mma ọ nwere ike igosi mmadụ abụọ nọ ya ebe ahụ site na mmalite dị umeala n'obi ya.
M ka na -ekwetaghị na nna m ochie na nne nne m esoghị m. Ya mere, mgbe m nọ n'Austria, edere m aha m n'aka m iji cheta ha abụọ. ee, achọghị m ichefu ịhụnanya ha abụọ gosiri m.
Na -akpali mmasị, ọkwa Hwang na -egosi na ọ hapụbeghị ikike niile nke ike ya. Ikekwe mgbe ọ rutere n'isi ọrụ ya, ọ nwere ike mechaa karịa ndị egwuregwu mara mma dịka Henrikh Mkhitaryan.
Teknụzụ dribbler enwetala ezigbo ọkwa. Ọ ka kwesịrị ịrụsi ọrụ ike iji wepụta ike ya niile.
Tebụl dị n'okpuru na-enye ozi zuru ezu gbasara Hwang Hee-chan. Ọ na -enyere gị aka ịgagharị akụkọ ndụ ya ngwa ngwa o kwere mee.
Aha n'uju: Hwang Hee-chan
aha otutu: Ehi (Hwangso)
Age: 25 afọ na ọnwa 8.
Ụbọchị ọmụmụ: 26 nke Jenụwarị 1996
Ebe amụrụ onye: Chuncheon, Gangwon, South Korea
Nna: Hwang Won-kyung
Nne: Abụ Young-mi
Ụmụnne: 1 nwanne nwanyị
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 2.1 million (2021 Ọnọdụ)
Ezigbo Net: Million 3.6 million (2021 Ọnọdụ)
elu: 1.77 m (5 ft 10 na)
Tupu imechi ihe ncheta a, ọ dị mkpa iburu n'uche na otu ike na -enyere Hwang aka inwe ihe ịga nke ọma bụ ịnụ ọkụ n'obi ime ka obodo ya dị mpako. N'ezie, ezinụlọ ya niile mejupụtara akụkụ nke akụkọ akụkọ ihe ịga nke ọma ya.
Ugbu a o meela ka ọ bụrụ nnukwu na egwuregwu bọọlụ, anyị nwere obi ike na ọ ga -elekọta nne na nna ya na nwanne ya nwanyị. N'ihi nnukwu ego ọ na -enweta, ọ nweghị ụzọ ezinụlọ ya ga -atụ egwu ụdị nsogbu ego ọ bụla.
Anyị na-atụ anya na ị masịrị akụkọ anyị gbasara Hwang Hee-chan Akụkọ nwata. Jiri nwayọ kerịta anyị ihe kachasị amasị gị gbasara dribbler Korea.